घर संयुक्त राज्य फुटबॉल स्टोरीहरू अंग्रेजी फुटबल खेलाडीहरू ब्रान्डन विलियम्स चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो ब्रान्डन विलियम्स बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, नेट वर्थ र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई उपनामका साथ अंग्रेजी पेशेवर फुटबलरको इतिहास दिन्छौं “चोकर“। उसको जीवन कहानी उसको शुरुको दिनदेखि नै शुरू हुन्छ, जब उनी खेलसँग प्रसिद्ध भए।
हो, सबैलाई थाहा छ उहाँ एक देब्रे पछाडि हुनुहुन्छ जो साहसी, शारीरिक र लेख्ने समयमा विस्थापनको लागि सेट छ ल्यूक श र युवा। यद्यपि, केवल एक हात फुटबल प्रशंसकहरूले ब्रान्डन विलियम्सको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई ध्यान दिन्छन् जुन धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
ब्रान्डन विलियम्स बाल्यकाल कहानी - परिवार पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन:
ब्रान्डन पल ब्रायन विलियम्सको जन्म सेप्टेम्बर3को 2000rd मा उनका बाबुआमाको लागि म्यानचेस्टर, युनाइटेड किंगडममा भएको थियो। सेतो अ English्ग्रेजी परिवारको जराबाट आएका फुटबलर नयाँ सहस्राब्दी, वर्ष (2000) को बिहानमा जन्मेका थिए जहाँ टेक्नोलोजिकल अवरोधहरू पहिले दावी गरिएको थियो - वास्तवमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन.
ब्रान्डन विलियम्स वर्ष २००० मा जन्म भएको थियो, जुन वर्ष विश्व थियो, वास्तवमा कहिल्यै अन्त भएन र सबै भविष्यवाणीहरू झूटा देखिए।
सत्य भनियो!… त्यो वर्ष 2000 ब्रान्डनको जन्म भएको थियो, त्यहाँ कहिल्यै थिएन Y2K, (कुख्यात सहस्राब्दी बग)। वास्तवमा, पूर्वानुमान गरिएको हवाईजहाज कहिले आकाशबाट गिरेन। क्षेप्यास्त्रहरू पनि दुर्घटनाबाट फुटेनन् र कम्प्युटरहरूमा मितिहरूको काल्पनिक रीसेटिंग कहिल्यै भएन। यी भविष्यवाणी गरिएका डरलाग्दो घटनाहरूको अस्तित्वले ब्रान्डन विलियम्सका अभिभावकहरूलाई ठूलो राहत प्रदान गर्‍यो।
जस्तै मार्कस राशफोर्ड, ब्रान्डन विलियम्सको म्यानचेस्टरको महान शहरबाट उसको परिवारको उत्पत्ति छ। यो एक विशाल खेल सम्पदाको साथ एक सहर हो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, युरोपमा बाँच्नको लागि सबैभन्दा जीवन्त ठाउँहरू मध्ये एकको रूपमा लेबल गरिएको। चाहे तपाईं गउरमेट डिनर खोज्दै हुनुहुन्छ, अपमार्केट वाइन बार, पारम्परिक 'वास्तविक Ale'पब, वा रात टाढा नृत्य गर्ने ठाउँ, म्यानचेस्टरको शहर (तल चित्रमा) यो सबै छ।
ब्रान्डन विलियम्सको परिवारको जन्म इ England्ल्याण्डको म्यानचेस्टरको महान शहरबाट भएको हो।
म्यानचेस्टर युनाइटेड स्टार एक मध्यम-वर्ग परिवार घरमा हुर्कियो। ब्रान्डनको अभिभावक प्रायः औसत मान्चेस्टर नागरिकहरू जस्ता थिए जसले औसत कामहरू गरेका थिए तर उत्तम वित्तीय शिक्षा थिएन। परिवार फुटबल गतिविधिहरु संग एक वजन मा एक कम आय को घर मा बस्ने।
ब्रान्डन विलियम्स बाल्यकाल कहानी - शिक्षा र क्यारियर निर्माण:
के तपाईंलाई थाहा छ… आफ्नो जीवनको प्रारम्भिक चरणहरूमा म्यानचेस्टरबाट प्रत्येक स्थानीय केटाले छनौट गर्नु पर्छ कि पर्दैन तिनीहरू एक हुन् लाल शैतान OR NOISY NEIGHBOR (स्काई ब्लू) प्रशंसक?.
ब्रान्डन विलियम्स - म्यानचेस्टरमा हुर्किएको अर्को बच्चाले रेड र स्काई-ब्लू प्रश्नको उत्तर दिए। छवि क्रेडिट: ट्विटर
प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक छ किनकि यसले तपाईंको शहरको बाहिर तपाईंको पारिवारिक जरा छ कि छैन पक्का गर्दैन। जहाँसम्म तपाईंको खुट्टा म्यानचेस्टरमा छ, तपाईंसँग प्रश्नको उत्तरको आशा छ। फेरि, प्रश्नको उत्तर दिँदा, तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्दछ कि तपाईको उत्तर अफ पोइन्टमा नहोस्, जस्तै तटस्थ क्लबहरू छनौट गर्ने; रोचडेल, बोल्टन वान्डरर्स वा विगन.
ब्रान्डन विलियम्सका लागि जवाफ सरल थियो।म्यान्चेस्टर युनाइटेड'एउटा क्लबले उसको परिवारका सबै सदस्यहरूले सहयोग पुर्‍यायो। एक फुटबल प्रशंसक भएको र खेल अवधि पछि कहिलेकाँही खेल खेलिरहेको, सानो ब्रान्डनलाई थाहा थियो कि उनीसँग फुटबलको साथ आफ्नो नाम कमाउने प्रतिभा छ। सानै उमेरमा, उनले युनाइटेड एकेडेमीमा आफूलाई हेर्ने सपना देख्न थाले।
एकेडेमी मापदण्डहरु सम्म आफ्नो बाटो को लागी काम गर्न को लागी कडा डिमिनेन्स बायाँ पछाडि शुरू भयो म्यानचेस्टरको स्थानीय पिचहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खेल खेल्दै। धेरै समय भएको थिएन जब उनी म्यान युनाइटेड स्काउट्स द्वारा चिनिन्थे जसले उनलाई निम्तो दिएका थिए क्लब संग परीक्षण। उनका ब्रान्डन विलियम्स अभिभावक र परिवारका सदस्यहरूको गर्वलाई कुनै सीमा थाहा थिएन जब उनले परीक्षा पार गरे र युनाइटेड एकेडेमीमा स्वीकार गरे।
ब्रान्डन विलियम्स बाल्यकाल कहानी - प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
आफ्नो बच्चाको बाँच्नको लागि फुटबल खेल्ने इच्छा बुझेर ब्रान्डन विलियम्सका आमा बुबाले उनको युवा क्यारियर समर्थन गर्न यथासक्दो गरे। तपाईंलाई थाँहा थियो?… ब्रान्डन युनाइटेड (उमेरको 6) एक समयमा सामेल भयो जब अमेरिकी बीमा निगम एआईजी क्लबको सर्ट प्रायोजित गर्नुहोस् र GOAT- सी रोनाल्डो उनको शक्तिको चरम मा थियो।
प्रारम्भमा, ब्रान्डनलाई थाहा थियो कि उनीसँग क्लबको भारी प्रतिस्पर्धी एकेडेमी दर्ताको माध्यमबाट जानको लागि महान् प्रविधि र महत्वाकांक्षा मात्र नभएर अझ बढी चाहिन्छ। उसले खेल बुद्धिमता, परिपक्वता, शारीरिक तन्दुरूस्ती रणनीतिहरू, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उत्कृष्टता प्राप्त गर्न उचित मानसिकता राख्नुपर्‍यो। यो देख्यो कि स्थानीय केटाले २ ran-टीम अन्तर्गत क्लबहरूमा आफ्नो मार्ग सुरक्षित गर्दै सफलतापूर्वक स्तरमा पार गर्यो।
ब्रान्डन विलियम्स बायोग्राफी तथ्य - प्रख्यातता:
2017 / 2018 सिजनको सुरूमा, ब्रान्डन अन्डर-एक्सएनयूएमएक्स टीममा पदोन्नती गरियो। It ले धेरै समय लिन सकेन उहाँ बायाँ-पछाडि आफ्नो परिपक्व भूमिकामा विचित्र हुन सक्नुहुन्छ। उसको कुकुरपना, परिपक्वता र आत्मविश्वासको इनामको रूपमा, ब्रान्डन विलियम्सलाई १'s- के कुकुर केटा को लागी एक उपलब्धि।
ब्रान्डन विलियम्स रोड टु फेम कथा- उसको परिपक्वताले उनलाई एक नेता बन्न डोर्यायो।
ब्रान्डन विलियम्स बायो - फेम टू फेम स्टोरी:
बाँया पछाडि अवसरको अन्वेषण गर्दै: संग ल्यूक श चोटपटकको लागी संवेदनशील हुनु र एशले जवान आफ्नो सर्वश्रेष्ठमा नभएको, ब्रान्डनले युनाइटेडको बायाँ-पछाडि स्थितिमा कमजोरी देख्यो र तुरुन्तै कांपिरहेको ठाउँ भर्ने योजनाहरू बनाउन शुरू गर्यो।
सब भन्दा पहिले, ब्रान्डन अगस्त 30 को 2019th मा सफलतापूर्वक इ the्ल्यान्ड युवा टीमको लागि लडे, एक विकास जसले उसको CV लाई बढावा दियो। त्यसोभए, किशोर बाँया-पछाडि बोअसको लागि योजना बनाउने काम सुरु भयो Ole Gunnar Solskjaer र युनाइटेड प्रशंसकहरू ठूलो रूपमा। किनभने ब्रान्डन एक स्थानीय खेलाडी थिए जो मान्चेस्टरमा जन्मेका थिए र हुर्केका थिए मार्कस राशफोर्ड), त्यहाँ एक अतिरिक्त रोमान्सको त्यो क्षणमा उनले दृश्यमा फस्दा, एक प्रभावशाली प्रदर्शन दिए।
म्यानचेस्टर युनाइटेडको 2019 / 2020 सिजन कमजोर हुँदै जाँदा, त्यहाँ आशाको किरण प्रदान गर्ने केहि पनि खोज्न बढ्दो प्रवृत्ति थियो। बाँया पछाडि। ब्रान्डन विलियम्सको उद्भव क्लबको लागि आशाको किरणको रूपमा बन्न पुग्यो किनकि स्थानीय स्टारले कुनै पनि समयमा नोभेम्बरको 24th, 2019 मा शेफील्ड युनाइटेड विरुद्ध पहिलो प्रिमियर लिग गोल गरे।
रान्डन विलियम्सले नोभेम्बर २०१3को २th नोभेम्बरमा शेफिल्डसँग –-– बराबरीमा युनाइटेडका लागि डेब्यू गोल बनाए।
यो meteoric वृद्धि हासिल वास्तवमा देखेको छ ल्यूक श र एशले जवान डर छ कि उनीहरूको बायाँ-पछाडि भूमिकाको लागि एक वैध दावेदार साँच्चै आइपुगेको छ। ब्रान्डनले भूमिकामा पूर्ण दावी राख्नु अघि यो केवल समयको कुरा हो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
ब्रान्डन विलियम्स प्रेमिका र पत्नी को हुन?
उनको प्रसिद्धि र खेल को शैली को उदारता संग, यो निश्चित छ कि संयुक्त प्रशंसकहरु को एक धेरै ब्रेंडन विलियम्स एक प्रेमिका वा पत्नी छ कि छैन को बारे मा सोचेको छ। हो! ... त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गरिरहेको छैन कि उहाँको शान्त शान्त र संकलित देखिने उसको खेलको शैलीको साथले उनलाई सम्भावित प्रेमिकाको इच्छा सूचीको शीर्षमा राख्दैन।
ब्रान्डन विलियम्सको प्रेमिका वा पत्नी छ कि छैन भनेर प्रशंसकहरूले सोचेका छन।
लेख्ने समयमा, ब्रान्डन विलियम्सले आफ्नो प्रेमिकाको बारेमा कुनै पनि जानकारी नखोज्ने सचेत प्रयास गरेका छन् जस्तो देखिन्छ। जहाँसम्म अझै लेख्ने समयमा, यस्तो देखिन्छ कि ऊ अविवाहित छ र सम्भवतः प्रेमिकाको लागि खोजी गर्दैछ। हो !! Thats- जारा म्याकडर्मोटको व्यक्तिको रूपमा देखिएको छ। अब हामी तपाईंलाई कथाको बारेमा केहि बताउँछौं.
सुन्दर जारा म्याकडर्मोटका लागि कथित उदारता: ब्रान्डनको पहिलो प्रीमियर लीग गोलभन्दा ठीक २ the नोभेम्बर, २०१ 24, लोकप्रिय ब्रिटिश वेबसाइट दर्पण उनको बारेमा एक कहानी प्रकाशित गर्नुभयो जुन सदा भव्य जारा म्याकडर्मोटको वास्तविकता स्टार स्याम थम्पसनको प्रेमिका हो।
ब्राण्डन विलियम्सले एक पटक जारा म्याकडर्मोटलाई उसकी प्रेमिका बन्न चाहेको आरोप लगाए।
रिपोर्टमा, साम थम्पसन (माथि उसको मोबाइल डिजिटल प्रमाण संग चित्रित) आरोप लगाए कि उनले ब्रान्डन विलियम्सलाई उनको प्रेमिका जारा म्याकडर्मोटलाई इन्स्टाग्राम मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयासमा समाते। सुन्दर जाराका लागि, साममा एक प्रेमीको बावजुद, यस्तो देखिन्छ कि उनी छैनन् प्रशंसकहरूको छोटो। कसलाई थाँहा छ?… जारा ब्रान्डन विलियम्सको लागि पसेकी हुन सक्छिन् र केही समयमै उनको प्रेमिका (वा नहुन सक्छ) हुन सक्छिन्।
ब्रान्डन विलियम्स व्यक्तिगत जीवन:
सबै फुटबल गतिविधिहरूबाट टाढा, ब्रान्डन विलियम्सको व्यक्तिगत जीवनलाई चिन्न तपाईंले उसको व्यक्तित्वको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सुरु गरेर, उहाँ एक शान्त, शान्त र संकलित फिगर हुनुहुन्छ। फुटबलबाट टाढा, ऊ प्राय: सहि स्थानहरूमा फेला पर्दछ, कहिले समस्यामा पर्दैन र सुखी जीवन बिताउने घटकलाई चिन्छ।
ब्रान्डन विलियम्स निजी जीवन फुटबल देखि टाढा।
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको बारेमा अधिक, ब्रान्डनसँग जीवनको लागि एक विधिगत दृष्टिकोण छ, जसले सुनिश्चित गर्दछ कि कुनै पनि कुराको लागि मौका छोड्दैन। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जसले निरन्तर यस्तो भावना राख्छ कि अवसर ढोका ढकढक्याउन पर्याप्त समय हुँदैन। संयुक्तको 'बायाँ-पछाडि' का दावेदार हुनु वास्तवमै उसले आफ्नो जीवनमा अहिलेसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अवसर हो।
ब्रान्डन विलियम्स पारिवारिक जीवन:
ब्रान्डन आफ्नो लालनपालनमा गर्व गर्दछन् र उनको परिवारका सदस्यहरू (विस्तारित परिवार सहित) फुटबलमा मात्र नभई खेलकुदमा पुगेको छ। तपाईंलाई थाँहा थियो?… विलियम्स परिवार म्यान्चेस्टरमा बक्सि'sमा उनीहरूले गरेको उपलब्धिको लागि पनि परिचित छ ब्रान्डनको चचेरो भाई - जोल्फा ब्यारेट जो लेख्ने बेला इ England्ल्यान्डको हुन् सुपर फेदर-तौल चैम्पियन।
ब्रान्डन विलियम्स अंग्रेजी बक्सि cha चैम्प जेल्फा ब्यारेटसँग सम्बन्धित छ।
माथि देखाईए अनुसार, ब्रान्डन विलियम्सको परिवारमा कालो ब्रिटिश जातीयताको पनि मिश्रण छ जसको परिवारको जरा अफ्रिकामा पत्ता लागेको छ।
ब्रान्डन विलियम्स जीवन शैली तथ्यहरू:
लेखनको समयमा, ब्रान्डन एक फुटबलर हो जसले संयुक्त, इ England्ल्यान्डको सब भन्दा ठूलो क्लबको लागि खेल्छन्। उसको खेलको शीर्षमा भएकोमा, त्यहाँ कुनै श doubt्का छैन कि उहाँ कुनै समय पनि करोडपति फुटबलर बन्नुहुनेछ। अब उसको जीवनशैली चिन्नुले तपाईंलाई उसको जीवनस्तरको राम्रो तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
ब्रान्डन म्यान्चेस्टरमा एक संगठित जीवन बाँचिरहेका छन्, जीवन असंगत खर्चबाट मुक्त। उहाँ त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले व्यावहारिक आवश्यकताहरू समात्नुहुन्छ जुन कि अधिक खर्च हुँदैन। लेख्ने समयमा, त्यहाँ विदेशी कारहरू जस्तो ठूलो कुरा छैन, ठूला हवेलीहरू सजिलैसँग सजिलैसँग देख्न सक्ने फुटबलरहरू जसले भव्य जीवन शैली जीउँछन्।
ब्रान्डन विलियम्स जीवनशैली। ऊ महँगो जीवनशैलीको औषधी हो।
ब्रान्डन विलियम्स अनटोल्ड तथ्यहरू:
एक बकबक फुटबलर: एक काका भाइ हुनु भनेको एक मुक्केबाज हो मतलब ब्रान्डन एक फुटबलर हो जो तातो क्षणहरूलाई माया गर्न सक्थ्यो। हो, उसले सजिलैसँग चिसो गुमाउन सक्छ र उनीहरूसँग लडाई गर्न चाहने विपक्षीहरूलाई प्रतिक्रिया दिन सक्छ। तल अवलोकन गरिए अनुसार, कसैले पनि स्थानीय म्यानचेस्टर केटासँग गडबड गर्न सक्दैन मायपाईले उसलाई झगडामा बोलाउनु नै उत्तम थिएन।
ब्रान्डन विलियम्स- एक बकवास रक्षक। छवि क्रेडिट: म्यानचेस्टरवेली न्यूज
उनी ब्रान्डन विलियम्स नामको 10 लोकप्रिय व्यक्तिहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छी हुन्: जब तपाईं गुगलमा "ब्रान्डन विलियम्स" को नाम खोजी गर्नुहुन्छ, तपाई धेरै नाम कमाउने व्यक्तिको नाममा बोर हुन सक्नुहुन्छ। विकिपेडियाका अनुसार, त्यहाँ १० सेलेब्रिटी ब्रान्डन विलियम्स छन् र हामी उनीहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छी हो। विकिपीडियाका अनुसार other अन्य ब्रान्डन विलियम्सको पहिचान जाँच गर्नुहोस्।
ब्रान्डन विलियम्स नाम बोक्ने अन्य among जनामध्ये सबैभन्दा कान्छो छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो ब्रान्डन विलियम्स चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।